Abavelisi beMathiriyeli ekrwada & nababoneleli |China Raw Material Factory
I-GanoHerb Technology (Fujian) Corporation
UkuTyalwa kunye nokuLinywa kwezinto eziphilayo
Lungiselela iOrgan yeGolide yeOrgan...
IGanoderma Cafe iThengisa eshushu ...
Udonga lweSeli ye-Bulk Organic ...
Ubuninzi beGanoderma Lucidum Rei...
Iibhokisi ezine zeSigmatic Mushroom...
I-Chaga, eyaziwa ngokuba yi-Inonotus obliquus, yifungus yonyango ekhula kwimithi emhlophe ye-birch.Ikakhulu ikhula kwi-hemisphere esenyakatho kwi-40 ° ~ 50 ° N latitude, oko kukuthi, iSiberia, iMpuma Ekude, uMntla Yurophu, iHokkaido, iNorth Korea, iHeilongjiang enyakatho yeChina, iNtaba yaseChangbai eJilin, njl.
I-Coriolus Versicolor Powder
ICoriolus versicolor – ekwabizwa ngokuba yiTrametes versicolor kunye nePolyporus versicolor – likhowa eliqhelekileyo lepolypore elifumaneka kwihlabathi liphela.
I-Coriolus versicolor yi-mushroom yonyango echazwe ngokubanzi kwi-prophylaxis kunye nokunyangwa komhlaza kunye nosulelo e-China.Kungqinwe ngokubanzi ukuba izithako ezifunyenwe kwiCoriolus versicolor zibonisa uluhlu olubanzi lwemisebenzi yebhayoloji, kubandakanya neziphumo ezivuselelayo kwiiseli ezahlukeneyo zokuzikhusela komzimba kunye nokuthintelwa kokukhula komhlaza.
Amakhowa eShiitake (igama lesayensi: Lentinus edodes) abizwa ngokuba yiShiitake eJapan.Amakhowa eShiitake alinywa eTshayina amawaka eminyaka.Amakhowa eShiitake aqulethe iintlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo eziye zaqinisekiswa luphando lwenzululwazi.Badlala indima ebalulekileyo ekulawuleni amajoni omzimba, ukwandisa impilo yamathambo, ukunciphisa i-cholesterol kunye nokukhuthaza impilo yentliziyo.
"I-Maitake" ithetha i-mushroom edansa ngesiJapan, igama layo lesiLatini: Grifola frondosa.Ikhowa kuthiwa lifumene igama emva kokuba abantu bedanile ngolonwabo xa belifumana endle, ezo ziimpawu zalo zokuphilisa ezimangalisayo.
I-Grifola frondosa iqulethe iindidi zezinto eziphilayo eziye zaqinisekiswa luphando lwezenzululwazi.Badlala indima ebalulekileyo ekwehliseni uxinzelelo lwegazi, ukunciphisa iswekile yegazi, ukuqinisa ukukhuseleka, ukuchasana nokuvuvukala, kunye nokuchasana nokuchasana.
Cordyceps militaris (igama lenzululwazi:Cordyceps militaris) kunye neCordyceps sinensis (igama lesayensi: Cordyceps sinensis), ekwaziwa njengamakhowa amandla, aqhele ukusetyenziswa kumayeza aseTshayina ukondla imiphunga nezintso, nokukhusela intliziyo.
Umgubo weMushroom weNgonyama
I-Lion's mane (i-Hericium erinaceus) luhlobo lwe-mushroom yonyango.Ixesha elide lisetyenziswa kumayeza esintu aseTshayina, ingonyama yengonyama ifumaneka ngokubanzi kwifom yokongeza.Uphando lwezenzululwazi lubonisa ukuba i-lion's mane iqulethe inani lezinto ezikhuthaza impilo, kuquka i-antioxidants kunye ne-beta-glucan.
I-Lion's mane mushroom iqulethe iintlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo eziye zaqinisekiswa luphando lwezenzululwazi.Idlala indima ebalulekileyo ekukhuseleni isisu, ukulungisa iimbilini zengqondo, ukuphucula imemori kunye nekhono lokuqonda, njl.
Ivenkile ethengisa izinto eziphilayo iGanoderma lucidum Extract
I-Ganoderma lucidum extract ngumzimba weziqhamo ezivuthiweyo ezivunwa ngexesha.Emva kokumisa, ithatha ukutsalwa kwamanzi ashushu (okanye ukutsalwa kotywala), i-vacuum concentration, i-spray drying kunye nezinye iinkqubo zokufumana i-Ganoderma lucidum extract powder, ephezulu-concentration ye-Ganoderma lucidum powder.
Organic Cell-udonga olwaphukileyo Ganoderma lucidum Spore powder
I-Ganoderma spores ziiseli ezivelisa umgubo ezikhutshwa kumnqwazi weGanoderma emva kokuba imizimba eneziqhamo ikhulile.I-spore nganye i-5-8 ye-microns kuphela ububanzi.I-spore ityebile kwizinto ezahlukeneyo ze-bioactive ezifana ne-Ganoderma polysaccharides, i-triterpenoids ganoderic acid kunye ne-selenium.
100% yeNdalo yeCoriolus Versicolor Extract Trametes Versicolor Yunzhi Polysaccharides
ICoriolus versicolor kunye nePolyporus versicolor – likhowa eliqhelekileyo lepolypore elifumaneka kwihlabathi liphela.Intsingiselo 'yemibala emininzi', i-versicolor ichaza ngokuthembekileyo le fungus ebonisa imibala eyahlukileyo.Ngokomzekelo, ngenxa yokuba imilo yayo kunye nemibala emininzi ifana neye-turkey yasendle, i-T. versicolor ibizwa ngokuba ngumsila we-turkey.
I-Organic Ganoderma yeMveliso yoNakekelo lwezeMpilo
Izilayi zeGanoHerb organic ganoderma sinense zinqunyulwa kwilog entsha ekhethwe kakuhle-ilinywe i-organic ganoderma sinense imizimba eneziqhamo.Iziqwenga ezichongiweyo zinokusetyenziswa ngokuthe ngqo ekwenzeni iti ye-ganoderma, isobho sokupheka kunye nokuphuza iwayini.Lukhetho olugqibeleleyo ukugcina impilo yemihla ngemihla, unyango lokutya kwaye ubonise njengesipho.1. Inkcazo: 20kgs / ibhokisi 2.Imisebenzi ePhambili: Inokunceda ukondla amandla abasebenzisi kunye nokukhulula i-malaise, ukukhwehlela, i-asthma, i-palpitation kunye ne-anorexia.3. Ukusetyenziswa kunye ...
Ixabiso leWholesale Ganoderma Lucidum Reishi Mushroom Spore Oil Softgel
Le oyile ye-spore isebenzisa itekhnoloji ye-CO2 yokukhutshwa kwe-supercritical ukukhupha kwi-spores esele ikhulile, eyenziwa ngeenkqubo zokukha, ukucoca, ukuhlolwa, ubushushu obuphantsi bokwephulwa kodonga lweseli.
Iziqwenga ze-Organic Ganoderma lucidum
Inkampani yethu yiDrafti yoMgangatho weSizwe waseTshayina weGanoderma lucidum (okanye ebizwa ngokuba yiReishi), iGanoderma lucidum (okanye ebizwa ngokuba yiReishi) isithako ezibini eziphambili yiGanoderma Lucidum(reishi) Polysaccharide kunye neTriterpene.
Organic Ganoderma lucidum (Reishi) Umboneleli nge-USA, EU, Japan kunye ne China organic certification.ISO, HACCP, Halal, Kosher, kunye ne-FDA eqinisekisiweyo.